ဆည်ပေါက်ကွဲပြီး သေသွားရင် တစ်ယောက် ယွမ်သုံးသောင်း ပေးလျော်မယ်လို့ ပြောတာ – Nyang Media
ဆည်ပေါက်ကွဲပြီး သေသွားရင် တစ်ယောက် ယွမ်သုံးသောင်း ပေးလျော်မယ်လို့ ပြောတာ
ဇန်နဝါရီ 26, 2019
ငြမ်း / ကချင်ပြည်နယ် အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဂျေယောဝူ
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံသား တစ်ယောက် ကို ငွေ (၄၅) သိန်းနဲ့ ဈေးဖြတ်တာနော်။ ဆည်ပေါက်ကွဲပြီး သေသွား ရင် တစ်ယောက် ယွမ်သုံးသောင်း ပေးလျော်မယ်လို့ ကျွန်တော်နဲ့ တွေ့တုန်းက ပြောတာလေ။ ကျွန်တော်တို့ကိုတော့ သေခိုင်းမယ်၊ သူတို့က အမြတ်ရမယ် ဆိုတာ …
ဦးဂျေယောဝူသည် မြစ်ဆုံစီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဦးသိန်းစိန် အစိုးရ လက်ထက်က အစီရင်ခံစာ ရေးသားခဲ့သည့် ကချင်ပြည်နယ်မှ အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦး ဖြစ်သည်။ ဦးဂျေယောဝူသည် လက်ရှိတွင်လည်း ကချင်ပြည်နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁) မှ အမျိုးသား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရွေးချယ် တင်မြှောက် ခံထားရသူ ဖြစ်သည့်အတွက် တစ်ကျော့ပြန် အသံထွက် လာသည့် မြစ်ဆုံစီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ငြမ်းမီဒီယာက တွေ့ဆုံ မေးမြန်းထားသည်။
ငြမ်းမီဒီယာ – မြစ်ဆုံစီမံကိန်း တကျော့ ပြန်လာပြီဆိုတော့ စီမံကိန်းဧရိယာ ထဲမှာ ပါနေတဲ့ မဲဆန္ဒနယ်က ကိုယ်စားလှယ် တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဘာတွေ ပြောမလဲ။
J.Y.W – ဒီအတွက် ရင်မအေးဘူးပေါ့။ ကျွန်တော်တို့က ကျီးလန့်စာ စားသလို ခံစားနေရတယ်။ တကယ်တမ်း လုပ်လာရင် ကျွန်တော့် နယ်မြေက ရေဝပ်ဧရိယာပဲ။ ကျွန်တော့်မဲဆန္ဒနယ် အားလုံးပဲ ခံစား ရမယ်။ ဆွမ်ပရာဘွမ် တစ်မြို့နယ်လုံး ပူတာအို၊ မချမ်းဘော၊ နမ့်မွန်၊ ခေါင်လန်ဖူး တိုက်ရိုက် ရေဝပ်ဧရိယာပဲ။ တိုက်ရိုက်သော်လည်း ကောင်း၊ သွယ်ဝိုက်၍သော်လည်းကောင်း ထိခိုက်မယ်။ ကောင်းမှုလုံ ဘုရားကအစ ရေမြုပ်မှာ။
ငြမ်းမီဒီယာ- ပထမအကြိမ် လွှတ်တော်သက်တမ်း အတွင်းက မြစ်ဆုံ စီမံကိန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အစီရင်ခံစာ တစ်စောင် တင်သွင်းခဲ့တယ်။ နောက်ပိုင်း အစိုးရက စီမံကိန်းကို ယာယီ ရပ်ဆိုင်းခဲ့တာနဲ့ ပတ် သက်ပြီး ပြောပြပါဦး။
J.Y.W – ကျွန်တော့်အနေနဲ့ လွှတ်တော်အသံဆိုပြီး လုပ်ခဲ့တာပါ။ ကျွန်တော့်ကို နာယက ဦးခင်အောင် မြင့် ခိုင်းတာပါ။ စီမံကိန်းနယ် မြေကို သွားပါ။ ကျန်တဲ့ စိတ်ဝင်စားသူတွေလည်း သွားကြပါ။ ကျွန်တော် က Mandate ပေးခံရတယ်လို့ ယူဆတယ်။ ရှေးအစိုးရ တွေ လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ ဟုတ်ပေမယ့် အဲဒီတုန်းကတော့ စစ်အစိုးရ အာဏာ သက်ရောက်နေတဲ့ အချိန်ဆိုတော့ ပြည်သူတွေက တအား ကြောက်တော့ မပြောရဲ မဆိုရဲကြဘူးလေ။
ဒီစီမံကိန်းက အချုပ်အခြာနဲ့ ဆိုင် တယ်။ မပေးနိုင်ဘူး။ စစ်ရေးအရလည်း ခြိမ်းခြောက်နိုင်တယ်။ နောင်နှစ်ပေါင်း (၅၀) လောက်ကြာ တော့မှ နင်တို့အဘိုးအဘွားဆီမှာ ငါတို့ဝယ်ပြီးသား၊ ငါတို့ လုံး၀ မရွှေ့နိုင်ဘူး။ ငါတို့ကို မောင်းထုတ် မလား၊ နင်တို့ သေချင်လားပေါ့။ အားနည်းတဲ့ နေရာမှာ မိုင်းတစ်လုံး ခွဲလိုက်ရုံပဲ၊ အားလုံး မုတ္တမ ပင်လယ်ကွေ့ ရောက်သွားမယ် …
ကျွန်တော့်ကို ကူညီတာ ကတော့ သံဃာအပါး သုံးရာကျော်။ မီးထွန်းပြီး ကန့်ကွက်ကြတာ။ အဲဒီကိစ္စက ကျွန်တော့်အတွက် အားဆေး ဖြစ်သွားတယ်။ မြစ်ဆုံက ပြည်လုံးချမ်းသာ ဆရာတော်ဘုရားရဲ့ အကြံဉာဏ်တွေ ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဆရာတော်တွေ ပါတယ်။ အချိန် (၆) လကျော် ကြာ တယ်။ စာမျက်နှာ (၂၆) မျက်နှာ ရှိတဲ့ အစီရင်ခံစာကို ပုံတွေနဲ့ တင် လိုက်တာ။ တင်ပြီးတဲ့နောက်တော့ လွှတ်တော် ဒုချုပ်က လာခေါ် တယ်။ ကျွန်တော့်ကိုတော့ ခေါ်ကြိတ်ပြီ လို့ထင်တာ။ ဦးခင်အောင် မြင့်က ကွန်ဂရက်ကျူးလေးရှင်း လုပ်ပြီး သမ္မတကြီးကလည်း ချီးမွမ်း နေတယ်လို့ ပြောတယ်။ ခင်ဗျားကို သမ္မတကြီးက စကားပြောလိမ့် မယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ငြမ်းမီဒီယာ – အဲဒီတုန်းက သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ဘာတွေပြောခဲ့လဲ။
J.Y.W – ကွန်ဂရက်ကျူးလေးရှင်းပါလို့ ပြောတယ်။ အခုလို စုံစုံလင် လင်နဲ့ သိပ်ကောင်းတဲ့ အစီရင်ခံစာ တင်လာလို့ ကျေးဇူးတင်ပါ တယ်။ ဒီအစီရင်ခံစာကို ဖတ်ရင်းနဲ့ ကျွန်တော်လည်း ပြည်သူ့သမ္မတ ဆိုတာ ပိုပေါ်လွင် ခံစားရပါတယ်။ အခု ပြည်သူတွေက အုံးအုံးကျွတ် ကျွတ် ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ ပြည်သူ့အတွက် ဦးဂျေယောဝူ ရေးထားသ လို ကျွန်တော်တို့ ပြန်လည်ဆန်းစစ် ဆုံးဖြတ်ပါမယ်။ ပြည်သူ့အတွက် ပဲ ဖြစ်စေရမယ်လို့ ပြောပါတယ်။ တစ်ခုတော့ ပန်ကြားချင်တယ်။ မီဒီယာတွေကို တစ်ပတ် ဆယ်ရက် လောက်တော့ မပြောပါနဲ့လို့ သမ္မတက ပြောပါတယ်။
ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် မြစ်ဆုံကို လုပ် ခွင့်ပေးရမယ် ဆိုတာ တော့ လက်မခံနိုင်ပါဘူး။ ဘာမှ မဆိုင်ဘူး။ လုံး၀ မဆိုင်ဘူး။ အနိုင် ကျင့်ချင်လို့ ဟိုပြော ဒီပြော ပြောတာ။ ကျွန်တော်တော့ ဒီလိုပဲ ယူဆ တယ် …
ငြမ်းမီဒီယာ – အဲဒီအစီရင်ခံစာထဲမှာ မြစ်ဆုံနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လို လုပ် သင့်တယ်လို့ အကြံပြုခဲ့လဲ။
J.Y.W – ဒီစီမံကိန်းကို ရပ်ဆိုင်းသင့်တယ်လို့ အကြံပြုခဲ့တယ်။ ဘာ ကြောင့်လဲဆို နောက်ဆုံးပိုင်းမှာ ကျွန်တော်ရေးထားတာက မြန်မာ နိုင်ငံရဲ့ အချုပ်အခြာကို အားလုံးသော်လည်းကောင်း၊ တစ်စိတ် တစ် ဒေသသော် လည်းကောင်း CPI ကုမ္ပဏီကို ဝကွက် အပ်လိုက်မယ့် စီမံကိန်းကြီးတော့ မလုပ်သင့်ပါဘူးလို့၊ တစ်နိုင်ငံလုံးကြီးရဲ့ ဘေးအန္တရာယ်ကို ခေါင်းမှာရွက်ထားပြီးမှ ကျွန်တော်တို့က သက်စွန့် ဆံဖျား စတေးပြီး တရုတ် CPI တွေ ကောင်းစားအောင် မလုပ်သင့်ပါ ဘူးလို့။ ဒါကြောင့် ဒီစီမံကိန်းကို နိုင်ငံတော် အကြီးအကဲများနဲ့ ခေါင်း ဆောင်များ ပြန်လည်စိစစ်ပြီးမှ ဆုံးဖြတ်သင့် ပါတယ်လို့ ကျွန်တော် ရေးခဲ့ပါတယ်။
အစိုးရသက်တမ်း (၃) နှစ် ရှိလာပြီ၊ လုံး၀ ချ မပြဘူး။ ချပြလိုက်ရင် ပြည်သူ တွေက လုပ်ပေးပါလို့ အော်ချင် အော် မယ်။ မလုပ်ပါနဲ့လို့ အော်ချင်အော်မယ်။ ပြည်သူကို ချပြသင့်တယ်လို့ ကျွန်တော် ယူဆတယ် …
ငြမ်းမီဒီယာ – ဒေသခံတွေကရော မြစ်ဆုံစီမံကိန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လို သဘောထားရှိလဲ။ ဘာပြောလဲ။
J.Y.W – ရပ်ဆိုင်းတာကို ကျေးဇူးအရမ်းတင်နေကြတာ။ ထာဝရ ရပ်ဆိုင်းအောင် လုပ်ပေးဦးလို့ တောင်းဆိုကြတယ်။
ငြမ်းမီဒီယာ – NLD အစိုးရလက်ထက်မှာ မြစ်ဆုံကိစ္စက ပြန်ပေါ်လာတာ ဆိုတော့ ဦးဂျေယောဝူ အနေနဲ့ လက်ရှိ အစိုးရကို ဘယ်လို အကြံ ပြုချင်လဲ။
J.Y.W – ပြည်သူတွေ မလိုလားတဲ့အတွက် သူတို့ရဲ့ ကျန်သေးတဲ့ သက်တမ်းမှာ ဆက်ပြီးဆိုင်းငံ့ဖို့ လုပ်ရမယ်။ သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်တို့၊ နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံတို့ဆီမှာ ပြည်သူတွေရဲ့ Power တွေ ရှိ နေတာပဲ။
ငြမ်းမီဒီယာ- NLD ရဲ့ ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေက မြစ်ဆုံစာချုပ်ကို မသိ သေးဘူးလို့ ပြောနေကြတယ်။ လက်ရှိအစိုးရ ထိပ်ပိုင်းလူတွေက စာချုပ်ကို မသိသေးဘူးဆိုရင် ယုံလား။
J.Y.W – ဒါကတော့ ယုံကြည်ဖွယ်ရာတော့ မဟုတ်ဘူး။ မယုံကြည် ပါဘူး။ အစိုးရကိုတော့ တင်ပြပြီးသား ရှိမှာပါ။ ဒီစီမံကိန်းတွေကို ချပြသင့်တယ်။ ကော်မရှင်လည်း ရှိနေတာပဲ။ ကော်မရှင်က ချပြ သင့်တာပဲ။ လက်ပံတောင်းတောင် စီမံကိန်းဆိုလည်း ပြည်သူကို ချပြလိုက်တာပဲလေ။ မတူတာ ကတော့ ဟိုက သတ္တုကိစ္စ၊ ဒါက တစ်နိုင်ငံလုံးကိစ္စ ဖြစ်နေတော့ သူတို့လည်း Sensitive ဖြစ်တယ်လို့ ကျွန်တော် ယူဆတယ်။ အစိုးရသက်တမ်း (၃) နှစ် ရှိလာပြီ၊ လုံး၀ ချ မပြဘူး။ ချပြလိုက်ရင် ပြည်သူ တွေက လုပ်ပေးပါလို့ အော်ချင် အော် မယ်။ မလုပ်ပါနဲ့လို့ အော်ချင်အော်မယ်။ ပြည်သူကို ချပြသင့်တယ်လို့ ကျွန်တော် ယူဆတယ်။
ငြမ်းမီဒီယာ – မြစ်ဆုံကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လက်ရှိအစိုးရကိုပဲ ပြောနေရတယ်။ စာချုပ် ချုပ်ခဲ့သူတွေနဲ့ မဆိုင်ဘူးလား။ သူတို့မှာရော တာဝန် မရှိဘူး လား။
J.Y.W – လုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေမှာလည်း တာဝန်ရှိတယ်လေ။ လုပ်ခဲ့တာ က (န . အ . ဖ) အစိုးရ လက်ထက်က လုပ်ခဲ့တာလေ။ သူတို့မှာ လည်း တာဝန်ရှိတာပေါ့။ သူတို့ ဖြေရှင်းရမှာပေါ့။
မြစ်ဆုံကို ပြန်လုပ်ဖို့ လော်ဘီပြန်လုပ်မယ်။ ဦးဂျေယောဝူက ဘာမှ ဝင်မပြောပါနဲ့။ ကျွန်တော့်ကိုတော့ အရင်က လူကြီးတွေကို ပေးခဲ့တာထက် မနည်းပေးပါမယ်။ ဘဏ်အကောင့် တစ်ခု၊ နှစ်ခုလောက် ပေးပါလို့ ပြောလာတယ်။ ကျွန်တော်က ရေငုံ နှုတ်ပိတ်နေပါမယ်လို့ စာချုပ်မှာ လက်မှတ်ထိုးပေးပါလို့ ပြောတယ်။ ဒါကတော့ …
နောက် တာဝန် အရှိဆုံး ကတော့ လက်ရှိအစိုးရပေါ့။ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရက ဆိုင်းငံ့ လိုက်တယ်လေ။ အခု ဒီအစိုးရကလည်း ဆိုင်းငံ့နိုင်တယ်။ လုပ်နိုင် တယ်။ သူ့ဆီမှာ ပါဝါရှိတယ်။ ပြည်သူတွေ ဘယ်လောက်တားတား သူတို့ လုပ်ချင်ရင် လုပ်လို့ရတာပဲ။
ငြမ်းမီဒီယာ- အနောက်နိုင်ငံတွေက ရင်းနှီးမြှုပ်မှုတွေ ရပ်နေချိန်မှာ တရုတ် ကပဲ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ လုပ်နေ တယ်။ အဲဒီလို အခြေအနေမျိုးမှာ မြစ်ဆုံကို လုပ်ခွင့် မပြုရင် တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ နှောင့် နှေးမယ့် သဘောမျိုး တရုတ်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးက ပြောတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ ပြည်နယ်က အမတ်တစ်ယောက် အနေနဲ့ အဲဒီ အပေါ်ကို ဘယ်လိုမှတ်ချက် ပေးမလဲ။
J.Y.W – ဒါက ပြည်သူနဲ့ ဆိုင်တယ်လေ။ ပြည်သူ မကြိုက်တဲ့ စီမံ ကိန်းတော့ မလုပ်တာ အကောင်း ဆုံးပဲ။ အခြားနည်းလမ်းတွေနဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလို့ ရပါတယ်။
ငြမ်းမီဒီယာ- CPI အနေနဲ့ ဦးဂျေယောဝူကို တွေ့ဆုံခဲ့တာမျိုး ရှိလား။
J.Y.W – အခုတော့ မရှိပါဘူး။ မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကို ရပ်ဆိုင်းကြောင်း ဆုံးဖြတ်ပြီးနောက်ပိုင်း လေးလ လောက်တော့ ရှိမယ်၊ ရက်စွဲတော့ မမှတ်မိ တော့ဘူး။ နေပြည်တော်က ကျွန်တော့်အခန်းကို CPI ရဲ့ GM အပါအဝင် အဖွဲ့လိုက် ရောက်လာတယ်။ သူတို့က ဘာပြောလဲ ဆိုရင် ဦးဂျေနဲ့ တိုင်ပင်ချင်လို့ လာတာပါတဲ့။ ဦးဂျေကိုလည်း ကူညီချင် ပါတယ်လို့ ပြောတယ်။ ကူညီချင်တယ်ဆိုရင် ဘာကြောင့် ကူညီမှာလဲ လို့ မေးတော့ သူတို့ မြစ်ဆုံကို ပြန်လုပ်ဖို့ လော်ဘီပြန်လုပ်မယ်။ ဦးဂျေယောဝူက ဘာမှ ဝင်မပြောပါနဲ့။ ကျွန်တော့်ကိုတော့ အရင်က လူကြီးတွေကို ပေးခဲ့တာထက် မနည်းပေးပါမယ်။ ဘဏ်အကောင့် တစ်ခု၊ နှစ်ခုလောက် ပေးပါလို့ ပြောလာတယ်။ ကျွန်တော်က ရေငုံ နှုတ်ပိတ်နေပါမယ်လို့ စာချုပ်မှာ လက်မှတ်ထိုးပေးပါလို့ ပြောတယ်။ ဒါကတော့ ကျွန်တော့်ကို လာဘ်ထိုးတာ ဖြစ်တယ်။ လက်မခံနိုင်ဘူး။ ကျွန်တော်တို့ဒေသ၊ ကျွန်တော်တို့ လူမျိုးအတွက် အသက်ပေး ကာ ကွယ် ရမှာပဲလို့ ပြောပြီး ပြန်လွှတ်လိုက်တာ။ အခြား ဘာမှ မပြော တော့ဘူး။ ခင်ဗျားတို့ အခုပြန်ရင် ကောင်း မယ်လို့ ပြောပြီး ပြန်လွှတ် လိုက်တာ။
ငြမ်းမီဒီယာ – အခုလို တစ်နိုင်ငံလုံးနဲ့ ပတ်သက်နေတဲ့ စီမံကိန်းကြီးအတွက် လွှတ်တော်က ဘာလို့ ငြိမ် နေတာလဲ။
J.Y.W – ကျွန်တော်က တစ်ဦးတည်းဆိုတော့ ဘာမှ မလုပ်နိုင်ဘူး။ အစီရင်ခံစာ လောက်ပဲ လုပ်လို့ ရမယ်။ အဆို ဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင် လည်း ထောက်ခံသူရှိဦးမှ၊ ဒီအဆိုကို ဆွေးနွေးဖို့တင်ရင်လည်း ထောက်ခံသူ တစ်ယောက်မှ မရှိဘူးလို့ ကျွန်တော်ယူဆတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် သူတို့လည်း ကြောက်ရမယ့်လူ ရှိနေတာကိုး။ မြစ်ဆုံနဲ့ ပတ်သက်လာရင်တော့ ကျွန်တော်က ကန့်ကွက်မှာပဲ။
ငြမ်းမီဒီယာ – သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်လက်ထက်က မြစ်ဆုံအတွက် အစီရင်ခံစာ တစ်စောင် တင်ခဲ့တယ်။ အခု ဒီအစိုးရ လက်ထက်မှာရော အဲဒီလို လုပ်ဖို့ အစီအစဉ် မရှိဘူးလား။
J.Y.W – လိုအပ်တာ အကုန်လုပ်မယ်။ လုပ်နိုင်တာ အကုန်လုပ်မယ်။ အသက်တောင် ပေးဆပ်မယ်လို့ ပြောပြီးသားပဲ။ ဘယ်အချိန် အကောင်အထည် ဖော်မလဲဆိုတာက အခု ဘာမှ မပေါ်လာသေး ဘူး။ ဘာမှလည်း မပြောသေးဘူးလေ။ သူတို့ဘက်က ဘာတစ်ခုမှ ချမပြသေးဘူးလေ။ ချပြရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ လုပ်မှာပေါ့လေ။
ငြမ်းမီဒီယာ – ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ မြစ်ဆုံစီမံကိန်းက ဆက်စပ်နေတယ်လို့ သုံးသပ် သူတွေရှိတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် မြစ်ဆုံကို လုပ်ခွင့်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ သဘောမျိုး ပြောနေတာတွေ ရှိတယ်။ အဲဒီ အပေါ် ဘယ်လိုမြင်လဲ။
J.R.W – ငြိမ်းချမ်းရေးက ကိုယ့်နိုင်ငံမှာ ကိုယ်တိုင်လုပ်ယူရမှာ။ ကျွန်တော်တို့က စကားများလို့ရတယ်။ ရန်ဖြစ်လို့ မရဘူး။ ငြင်းခုန်လို့ ရတယ်။ တိုက်ပွဲ မလုပ်ပါနဲ့။ နိုင်ငံရေးတော်တဲ့ အသိုင်းအဝိုင်းက တိုက် စရာမလိုဘဲ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်နိုင်တာတွေ အများကြီး ရှိပါ တယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် မြစ်ဆုံကို လုပ် ခွင့်ပေးရမယ် ဆိုတာ တော့ လက်မခံနိုင်ပါဘူး။ ဘာမှ မဆိုင်ဘူး။ လုံး၀ မဆိုင်ဘူး။ အနိုင် ကျင့်ချင်လို့ ဟိုပြော ဒီပြော ပြောတာ။ ကျွန်တော်တော့ ဒီလိုပဲ ယူဆ တယ်။ ဒီစီမံကိန်းက အချုပ်အခြာနဲ့ ဆိုင် တယ်။ မပေးနိုင်ဘူး။ စစ်ရေးအရလည်း ခြိမ်းခြောက်နိုင်တယ်။ နောင်နှစ်ပေါင်း (၅၀) လောက်ကြာ တော့မှ နင်တို့အဘိုးအဘွားဆီမှာ ငါတို့ဝယ်ပြီးသား၊ ငါတို့ လုံး၀ မရွှေ့နိုင်ဘူး။ ငါတို့ကို မောင်းထုတ် မလား၊ နင်တို့ သေချင်လားပေါ့။ အားနည်းတဲ့ နေရာမှာ မိုင်းတစ်လုံး ခွဲလိုက်ရုံပဲ၊ အားလုံး မုတ္တမ ပင်လယ်ကွေ့ ရောက်သွားမယ်။ ယွမ်သုံးသောင်းနဲ့ ဖြတ်ထားတာ။ အခုဆိုရင် သိန်း (၆၀) လောက် တန်တယ်။ အဲဒီတုန်း ကတော (၄၅) သိန်းပဲ။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံသား တစ်ယောက် ကို ငွေ (၄၅) သိန်းနဲ့ ဈေးဖြတ်တာနော်။ ဆည်ပေါက်ကွဲပြီး သေသွား ရင် တစ်ယောက် ယွမ်သုံးသောင်း ပေးလျော်မယ်လို့ ကျွန်တော်နဲ့ တွေ့တုန်းက ပြောတာလေ။ ကျွန်တော်တို့ကိုတော့ သေခိုင်းမယ်၊ သူတို့က အမြတ်ရမယ် ဆိုတာတော့ မလုပ်ပါနဲ့၊ အခြားဟာတွေ လာ လုပ်ပါ။ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးတွေ၊ သတ္တု လုပ်ငန်းတွေကို တရားဝင် လာလုပ်ပါလို့ ပြောပါရစေ။
ငြမ်းမီဒီယာ – မြစ်ဆုံနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လို မှတ်ချက်ပေးမလဲ။
J.Y.W – ထာဝရ ရပ်ဆိုင်းပေးပါ။ တရုတ်က ဘယ်လိုပဲ ပြောပြော။ သံအမတ်က ပြောတယ်ဆိုတော့ အစိုးရ နည်းနည်း ပါတာပေါ့။ သူတို့ရဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တွေကို ကာကွယ် ပေးချင်တာပေါ့။ သူ့တာဝန် အရ တော့ ပြောမှာပဲ။ ဒါကို ကျွန်တော်တို့က နာခံရမယ်။ မနာခံရင် သွားမယ်လို့တော့ လုပ်လို့ မရဘူး။ ကိုယ့်အချုပ်အခြာ၊ ကိုယ့်အာဏာနဲ့ နေတာကို။
ငြမ်းမီဒီယာ – ဘာများ ဖြည့်စွက် ပြောချင်ပါလဲ။
J.Y.W – အခု ၂၀၂၀ နား နီးလာပြီ။ လွန်ခဲ့တဲ့ အချိန်တုန်းကတော့ မီဒီယာတွေ အားလုံးက NLD ဘက် ပါသွားကြတာ။ မျှတရင် ကောင်းတယ်လို့ ယူဆတယ်။ ပါတီတိုင်းရဲ့ အားနည်းချက်တွေကို တင်ပေးနိုင် ရင် ကောင်းပါမယ်။ အားလုံးကို မျှမျှတတ လုပ်ပေးပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်။
Tags: NLD, ကချင်ပြည်နယ်, စီမံကိန်း, ဆည်, တရုတ်, မြစ်ဆုံ
ပြည်သူ့ဆန္ဒဆိုတာမှာ မြစ်ဆုံကို ကန့်ကွက်တဲ့ သူတွေရဲ့အသံကို ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး
မြစ်ဆုံဆည်က စာချုပ်ကြောင့် ဆိုတာထက် နိုင်ငံရေးကြောင့် လာဘ်ထိုးချင်တာဗျ